Rastra Daily | प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी देउखुरी राख्न संसदमा प्रस्ताव : दाङमा खुसीयाली, बुटवलमा आन्दोलन
उनले भने,’हामीले आज पनि सदनमा उठेर विरोध गरेका थियो । तर १९ गतेसम्मको लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । अव हामीले यहाँ राजधानी हटाउने षडयन्त्र भएका सडकबाट कडा विरोध गर्नुको विकल्प छैन जसरी पनि बुटवलका रहेक कारण राजधानी ठीक त्यहि नै राख्नुपर्छ ।’दाङका प्रदेशसभा सदस्य रेवती रमण सर्माले दाङ सबै हिसावले उपयुक्त भएका कारणले सरकारले प्रस्ताव लगेको बताए । उनले भोलिको विकासलाई मध्यनगर गर्दे उपयुक्त ठाउँमा राजधानी राखिएको बताए । उनले दाङ राजधानी हुँदैमा बुटवलको विकासलाई असर नपर्ने बताए । उनले भोलि पार्टी संसदीय दलको बैठक बस्ने र फेरि सदनमा छलफल हुने बताए । नयाँ ठाउँमा राजधानी बनाउदाँ त्यो विकास पनि हुने भएको सवै हिसाव भावी दिनको ध्यान राख्दै राजधानी टुग्गाउनु पर्ने बताए ।
उनले प्रस्ताव ल्याउने शैली गलत भएकोले अव बुटवलबाट राजधानी बाहिर लैजाने विषय कडा विरोध गर्ने चेतवानी दिए । ‘यसरी ल्याउनु थियो भने बिषय समिति किन गठन गर्नु गरेको ? अनि विज्ञ समुह किन राखिएको हो । अनि यत्रो समय किन ढिलाई गर्नु परेको हो ? ,’ उनको पश्न थियो ।